Dilaagii Norway oo laga yaabo in bulshada dib loogu soo dhexdaayo | Somaliska
Af-Soomaali / Norway
Dilaagii Norway oo laga yaabo in bulshada dib loogu soo dhexdaayo
Dhaqaatiir baarta cudurada maskaxda ku dhaca oo maxkamadi u xilsaartay in ay baaraan xalada caafimaad ee Anders Behring Breivik, oo ah ninkii gaystay xasuuqii ka dhacay Norway jasiirada Utøya 22 jully galaaftayna nafta 77 qof oo 2 ka mid ahi soomaali ahaayeen, ayaa sheegtay in ninkaas maankiisu uusan sax ahayn markii uu dilka geysanayay.
Hadii hadalka dhaqaatiirta aan dib loogu noqon oo sida ay u soo saareen loo qaato sida sharciga Norway qobo waxaa meesha ka baxaya in ninkan xabsiga lagu hayo si loogu ciqaabo xasuuqii uu gestay, waxaana taasi badelkeeda la gaynayaa halka lagu xanaaneeyo dadka dhimirkoodo aanu caafimaadka qabin ilaa inta uu bulshada qatar galin karo.
Sida laga soo xigtay khubaro dhinaca quunaanka ah, hadii loo arko in xaaladiisa caafimaad hagaagtay oo aanu bulshada wax qatar ah ku hayn waxaa suurtagal ah in uu bulshada markale ka soo dhex muuqdo oo la siidaayo,taas oo uur-kutaalo xanuun badan ku reebi karta eheladiii uu dadkooda xasuuqay.
Nidaamka cadaaladeed ee reer-galbeedka ayey waalidu caan ka tahay ayadoona inta badan dadka dambiyada dilka ah geysta, si ay sahalanaato amaba meesha oga baxdo caqaabtii ay mudan lahaayeen,ay sheegtaan in aysan maskaxiyan dhamaystirayn markii ay wax dilayeen.
Saciid Cabdi Cusman
Holland oo mamnuucday khaatka
Sweden waa wadanka ugu adag in asxaab laga samaysto
November 30, 2011 at 12:15
Waa taas cadaalada reer galbeedka. Midkooda xasuuq geysta waxay leeyihiin waa waalanyahay, midkii anaga ah ee ficil kaas la mid ah ama ka yar sameeya waxaa la oronayaa waa argagixiso.
November 30, 2011 at 12:39
Nin Muslim ah , haddii uu ficil Sameeyo Muslimiinta dhan waa Wada Argagxiso ayay dhahaan , Kitaabka Quraankana way Gubaan , balse nin Reer Yurub Norwaygian ah haddii uu sameeyo , maxaysan Norwaygianka dadka ah Agagaxiso u NOQON ??
Cadaaladeey Sheegtaanba Waa Ka Ceeyrtoonyihiin….
November 30, 2011 at 13:53
WAXAN I SLAHAY AMAAD NORGE U FAALASHAA MUG WAL WAASA ISKALA IILAY MINIIBA KII MUG LASOO DEEYO – UMADA LAGA HAAYO XAA LOO SOO DEEYHAA SUN HADISHEEE
La jiifiyaana banaan aan maqli jirey iyo qaali huurshe sheeko xariiradii laga sheegi jirey waase tiiyoo cilmiyeysan oo shaati weyn loo geliyey.
Haddii uu maskaxiyan jiran yahay siduu qorshaha intaas la eg u degi karaa kow centerka meel ku dhow xaruntii dowladda ayuu qaxiyay, hadana arday masaakiina oo meel kale oo jasiirad shir u haystay ugu tegay asagoo weliba dharka poliska soo xirtey iskana dhigey inuu warbixin uga sido qaraxii ka dhacay centerka Oslo markay isu soo baxeena baas mariyey asagoon kala reebeyn.
Waxan rajeynayaa ineysan maxkamaddu go’aan ku gaarin hadalka dhakhaatiirta ee ay guddi kale oo dhakhaatiireed oo ka duwan kuwii hore u magacawdo si ay runta uga sal gaarto.
waxaan tageersanahay waxa kasoo baxay dhakhtarada, oo ah inuu yarkaasi jiran yahay, cause of dadkiisa ma laayeen ee kuwa uu neceb yahay ayuu layn lahaa, somalideena kuma badna dadka qaba xanuunada maskaxda, lakiin european ka ayaa la nool cuduradaas, inta badan while ay somalida la nool yihiin dhaqaale daro iyo qabyaalad.
December 1, 2011 at 01:41
sc all sln kaa dib waa macquul inuusan maskaxiyan wanaagsanayn waayo inta badan dadka an iimaanka lahayn o an khaliqa xiriir la lahayn maskaxdoodu ma dhameestirna nolosha haday dhibyar ku qabsato inuu isdilo xata wey dhacdaa layaabna malahan inuu dad laayo waana suurtagal in barnaamijkan argagixisada o galada ku wareegay ay kasoo horjeedaan o xalkale ay isku dayaan any way meel lagu haayaba ma qabo in dadka lagusoo dhexdaayo maskaxdiisoon fadhin.